Meheradaha isla markaaba lacag sameeya 2022 - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn Meheradaha Dhaqaale Sameeya Isla markaaba 2022
isha sawirka: allbusiness.com
Dunida ganacsigu way ku kobcaysay fikrad kasta oo ay heshay ilaa Covid-19 uu yimid wax walbana way is beddeleen. Si kasta oo suurtagal ah, ganacsiga adduunka wuxuu galay jahawareer. Marka lagu daro xaqiiqda xitaa ka hor masiibada, qaar badan oo ka mid ah moodooyinka ganacsigu maaha kuwo fudud sida ay u muuqdaan.
Qalalaasahan ayaa ka dhigay arrima aad ugu adag milkiilayaasha ganacsiyada badan waxayna daaha ka qaadeen dhaqaalaheenna dhaqaale halka ay siisay fursadaha kuwa kale si ay u helaan habab cusub oo ay ku bilaabaan ganacsiyo u oggolaanaya inay lacag sameeyaan isla markaaba.
Ganacsade ahaan, hal awood oo weyn oo ay tahay inaad had iyo jeer xoojiso waa awooda aad ku aragto fursadahan. Hadda oo aad haysato internetka oo aad wacdo, bilaabista ganacsi yar oo faa'iido leh ayaa aad u fudud.
Samaynta laba dakhli oo dakhli waxay noqon kartaa dadaal toos ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad ka jawaabto su'aalaha aasaasiga ah;
Ma leeyahay khibrad shakhsi ah oo iga dhigi karta musharax ku habboon bilaabista ganacsi faa'iido leh?
Ma jirtaa dhibaato adag oo ganacsi yari xalin karo?
Ma jiraan wax tignoolajiyad cusub ama isbeddel ah oo aan u isticmaali karo ilo dakhli?
Ma jirtaa alaab hadda jirta oo aad soo saari karto oo aad ku iibin karto lacag ka yar ama faa'iido sare oo aad ku iibin karto?
Intarneedku waxa uu bixiyaa fursado badan oo lagu maalgelinayo laguna bilaabi karo ganacsiyo yaryar oo faa'iido leh. Qaar badan oo ka mid ah fursadahan ayaa ka faa'iidaysta hibadaada jirta. Xirfadaha naxwaha iyo farsamada, iyo sidoo kale xirfadaha warbaahinta bulshada, ayaa tusaale u ah awoodahaas.
Waa maxay ganacsiga ugu fudud ee la bilaabo?
Ganacsi adeeg ayaa ugu fudud in la bilaabo, gaar ahaan qofka cusub. Ganacsiga adeeggu waa nooc kasta oo shirkad ah oo iibisa adeegyada. Si kale haddii loo dhigo, halkii aad ka iibin lahayd alaab ama alaab, waxaad iibisaa kartidaada, shaqadaada, ama khibradaada.
Waa maxay tillaabooyinka aan u baahanahay inaan qaado si aan ugu sii sugnaado ganacsiga iyo abuurista maal?
Abuur xeelad maaliyadeed oo aan cillad lahayn.
Halista qaado oo geesi noqo.
Ka gudub cudur daarka oo xooji kalsoonidaada.
Samee lacag aad u badan.
Keydso qayb ka mid ah dakhligaaga.
Lacagtaada ku bixi si caqli gal ah.
Sideen ku bilaabo ganacsi faa'iido leh?
Shirkadaha ugu faa'iidada badan waxay ku kala duwan yihiin warshadaha, ballanqaadyada waqtiga, iyo kharashyada bilowga ah. Iyadoo aan loo eegin fikradda ganacsi ee ugu faa'iidada badan ee aad doorato, waxaa jira dhawr waxyaalood oo aad u baahan doonto si aad shirkaddaada u kiciso oo ay u shaqeyso.
Hoos ka hel;
1. Raadi fikradda ku habboon oo si qotodheer u baadhbuur.
Waa run in fikradda wanaagsani ay tahay aasaaska ganacsi kasta. Si kastaba ha ahaatee, kuma filna haddii aadan fikradaas ka dhigi karin mid dhab ah. Waa inaad samaysaa cilmi-baaris si aad u hubiso in fikraddu ay guulaysan doonto.
Kahor intaadan aad ugu fogaan fikradaada, ku socodsii habka ansixinta oo ay ku jiraan cilmi baarista suuqa iyo tartamayaasha, iyo sidoo kale falanqaynta suurta galnimada maaliyadeed.
Tallaabada ugu horreysa ee habkan ayaa noqon doonta in lala tashado liiskan shirkadaha ugu faa'iidada badan.
2. Ka dhig mid rasmi ah
Waa waqtigii lagu qorsheyn lahaa makaanikada ganacsiga qorshe ganacsi oo si wanaagsan loo habeeyey ka dib markaad hubiso inaad haysato fikrad wanaagsan oo aad ku shaqeyso. Waxaad u baahan doontaa inaad ka dhigto mid rasmi ah ka dib markaad hubiso inaad wax walba hoos ugu dhacday warqad.
Tan waxaa ka mid ah go'aan ka gaarista qaab-dhismeedka ganacsiga, helitaanka EIN, diiwaangelinta magacaaga "Doing Business As" (haddii ay khusayso), iyo helitaanka oggolaanshaha ganacsiga iyo diiwaangelinta looga baahan yahay in albaabbadaada loo furo.
3. Hel maalgelinta ku habboon.
Bilawga, sida nooc kasta oo kale oo ganacsi, waxay u baahan yihiin maalgelin si loo ballaariyo. Si kastaba ha ahaatee, ganacsade cusub ahaan, waxaa laga yaabaa inaad ku adkaato inaad u qalanto deynta ganacsiga caadiga ah isla markiiba.
Taasi waa sababta ay tahay inaad isticmaasho kaarka deynta ganacsiga si aad u maalgeliso ballaarintaada bilowga ah. Kaliya ma heli doontid waqti ka sahlan inaad u qalanto kaarka deynta marka loo eego deynta ganacsiga caadiga ah, laakiin sidoo kale waxaad awoodi doontaa inaad dejiso taariikhda deynta ganacsigaaga, hesho gunno iyo dhiirigelin markaad kharash gareyso, oo aad ka faa'iidaysato 0 % xilliyada hordhaca ah ee APR (asal ahaan amaah bilaash ah).
Meheradaha Dhaqaale Sameeya Isla markaaba 2021
Iyadoo 75 milyan oo caruur Boomers ah ay ku nool yihiin Maraykanka oo keliya, Gen X ayaa la filayaa inuu dhaafo Boomers marka la gaaro 2028, bilaabida ganacsi caawinta dadka da'da ah waxay noqon doontaa mid baahi weyn loo qabo waxaana jiri doona lacag badan oo la sameeyo.
Iyadoo tani ay dhiirigelin u tahay xirfadda kalkaalinta, dhammaan adeegyada daryeelka waayeelka uma baahna tababar caafimaad. Hawlaha shaqo, dhamaystirka hawlaha gudaha, bixinta biilasha, gaadiidka, iyo ka shaqaynta dadka si fudud ayaa dhammaantood ah tusaalooyinka daryeelka waayeelka.
Bilaabida freelancing ama latalinta waa ganacsi leh habka ugu dhaqsaha badan ee lacag loo sameeyo isla markaaba. Tani waxay si fudud u tuseysaa inaad iibinayso adeeg halkii aad ka iibin lahayd alaab, iyadoon loo eegin haddii aad tahay shirkad hal qof ah ama hay'ad ubaxeed.
Ma jiraan habayn ama kharashyo dheeraad ah. Si aad u bilowdo, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa;
Isku xirka interneedka si aad u bilawdo hawsha dhinacaaga.
#3. Iibinta buugaagta E-books
Haddii aad haysato wakhti firaaqo ah gacmahaaga oo maskaxdaadu ay baratamayso, qorista waxay noqon kartaa siideyn aad u fiican. Waxaa laga yaabaa inaad ogaato in erayadaada lagu soo ururin karo ebook qiimo leh oo ah ganacsi lacag samayn ah oo ugu sarreeya.
Tani uma baahna inay noqoto shaqadaada waqti-buuxa ah. Si kastaba ha ahaatee, waa inay noqotaa mid wanaagsan. Ma aha, si kastaba ha ahaatee, inaad ka dhigto mid qumman. Cusboonaysiinta nooca had iyo jeer waa la heli karaa!
#4. Abuuritaanka Koorsooyin Online ah
Covid 19 ayaa dadka ka dhigay inay ogaadaan muhiimada fasallada farsamada gacanta. Waxaad sidoo kale ka faa'iidaysan kartaa fursadan oo waxaad bilaabi kartaa tababar online ah halkaas oo aad ka abuurto koorsooyin online ah.
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, isbeddelkani aad buu u sii dardargeliyay taasoo caddaynaysa inay tahay istaraatijiyad gaar ah oo lagu dhisayo tababbarka khadka tooska ah ee cabsida leh halkaas oo aad u soo bandhigto qiimaha ardaydaada.
Waxaad sidoo kale, abuuri kartaa koorso online ah oo weligii cagaarnaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad gabi ahaanba dakhli ku soo saarto wax ka yar laba bilood. Iibinta hore ee koorsooyinka khadka tooska ah ayaa durba bilaabay laba usbuuc ka dib.
#5. Adeegyada baabuurta lagu dhaqo
Adeegga dhaqida gaadiidka mobilada ayaa ku xiga liiskayada ganacsiyada ugu faa'iidada badan.
Shakhsiyaad badan ayaa diyaar u ah inay bixiyaan khidmadaha dhaqida baabuurta guurguura ee u yimid halkii ay ka raaci lahaayeen magaalada oo dhan si ay u gaadhaan baabuurka lagu dhaqo.
Tani waxay si gaar ah run ugu tahay kuwa leh gawaari heer sare ah oo doonaya feejignaan shakhsiyeed oo dheeraad ah.
Kaliya kama faa'iidaysan doontid soo jeedinta qiimaha gaarka ah ee ahaanshaha moobil ahaan sidii baabuur dhaqida mobilada iyo adeegga tafatirka auto, laakiin sidoo kale waxaad badbaadin doontaa kharashka badan ee dheeraadka ah iyo kharashka bilowga ah ee haysashada goob jireed.
#6. Tababarayaasha gaarka ah
U shaqaynta goob jimicsi oo wayn looma baahna in aad u bedesho hamigaaga jirdhiska shaqo, sidoo kale lagama maarmaan ma aha in aad leedahay goobtaada si aad dadka u tababarto. Ku qaado bandhiga jir dhiska ee wadada adigoo wata dhowr miisaan, xargaha, iyo roogaga yoga ee jirridda gaarigaaga.
Ku bixi kulamo mid-ka-mid ah guryaha macaamiishaada ama ku xayaysii casharro kooxeed beerta u dhow ama xarunta beesha si aad u noqoto tababare shakhsi ah. Ka dhigista jirdhiska mid aad u fudud oo ay heli karaan macaamiishaada waxay noqon kartaa furaha gaaritaanka labada ujeeddooyinkaaga.
Meheradaha fayoqabka iyo fayoqabka ayaa si isa soo taraya caan u sii kordhaya iyadoo dadka Maraykanku ay bilaabeen inay cunaan cunto caafimaad leh oo ay jimicsi badan sameeyaan.
#7. Kirada fasaxyada
Airbnb iyo VRBO waxay fududeeyeen waligaa sidii aad lacag uga samayn lahayd gurigaaga fasaxa ee aan la isticmaalin ama xitaa qolkaaga jiifka ee firaaqada ah.
Haddii aad degan tahay goob dalxiis oo caan ah, waxa aad si fudud lacag u samayn kartaa adiga oo ka kiraysanaya qolalka gurigaaga dadka soo booqda ganacsi ahaan.
# 8. La-tashiga
Waxaa laga yaabaa in dadku ay ku dawarsadaan aqoontaada iyo xirfadahaaga qaybtaada haddii aad muddo dheer ganacsi ku jirtay. Maxaad khibradaada ugu beddeli weyday xirfad cusub oo lataliye ahaan?
Ku salaysan qandaraas, waxaa lagugu magdhabi karaa inaad ka hadasho shirarka warshadaha ama munaasabadaha, u adeegto guddi la-taliyayaal bilow ah, ama aad siiso khibradaada si aad gacan uga geysato qaabaynta istaraatiijiyada shirkad jirta. Bilaabidda shirkad la-talin, iyadoon loo eegin xirfadahaaga, waa fursad cajiib ah oo aad ku kasbato mushaharka riyadaada markaad ka shaqaynayso jadwalkaaga.
#9. Naqshadaynta shabakada
Sawir nadiif ah oo toosan ayaa noqday mid aad uga muhimsan abid ganacsiyada yaryar maadaama tirada sumadaha u tartamaya dareenka macaamiisha ay sii kordheyso. Haddi ay awoodaan ama aanay awoodin inay awoodaan xayaysiis balaadhan ama wakaalad suuqgeyneed, dhab ahaantii ganacsi kasta oo yar waxa uu u baahan doonaa adeegyo naqshadayn garaaf ah wakhti ka waqti.
Markaa, haddii aad qaadatay fasalo naqshadeed si aad ugu darto dareenkaaga adag ee summaynta, waxaad sidoo kale ku samayn kartaa yaabab Photoshop, Illustrator, iyo InDesign.
Naqshadeeye garaafiye ahaan, waxaad xirfadahaaga u rogi kartaa ganacsi lacag sameeya isla markaaba. Weli ma xami doontid kharash dheeraad ah, waxaad awoodi doontaa inaad ku dallaci karto sicirka saacadaha sare si aad u sameyso waxa milkiilayaasha ganacsiyada yaryar aysan awoodin; naqshadeynta ololaha suuq-geynta dilaaga ah.
#10. Qoraal-qoraha suuq-geynta
Haddii aad xirfad u leedahay luqadda, waxaad xirfadahaaga gelin kartaa inaad ku shaqeyso koobiga ololaha suuqgeynta ee shirkadaha kale. Hadda, qaybta suuq-geynta nuxurkeedu waa $412 bilyan.
Haddi aad samaynayso sumad la xasuusan karo ama aad qorayso sharaxaad qoto dheer oo ku saabsan adeegyada shirkada, ku kalsoonow inaad faa'iido samayn doonto iyada oo aan loo eegin.
Su'aalaha Inta badan Layska Waydiiyo Meheradaha Lacagta Sameeya Isla markaaba 2021
Sideen ku bilaabaa ganacsi faa'iido leh?
Waxaad bilaabi kartaa ganacsi lacag-samayn ah oo sare ah adiga oo hela fikradda saxda ah oo si qotodheer u baadha, ka dhiga mid rasmi ah oo raadso maalgelin sax ah.
Meheraddee ayaan bilaabi karaa in aan lacag degdeg ah sameeyo?
Waxa jira ganacsiyo badan oo aad samayn karto laakiin ganacsiyada lacag-samaynta ah ee ugu sarreeya ee aad ku dhiirato waa; Naqshad garaafyo, Qoraal-qoraal, La-talin, Kiraysi fasaxyo, iwm.
Maxaan runtii u baahanahay si aan u bilaabo mid ka mid ah ganacsiyadan?
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa xirfadahaaga iyo isku xirka internetka.
Waa intaas oo dhan. Kuwani waxay ku saabsan yihiin ganacsiyada isla markaaba lacag sameeya oo aan u baahnayn shaqo badan ama lacag hor leh.
Haa, bilaabista ganacsigu way adag tahay, laakiin wax qiimo leh waligeed lama gaadhin dhidid yar iyo go'aan qaadasho la'aan. Hadda adiga ayay kugu xiran tahay inaad qaado tallaabada xigta.
7 Siyaabood Oo Lacag Lagu Siinayo Si Aad U Dhageysato Wicitaanada 2022
"Sumcad xun" guud ahaan macnaheedu waa in warbixinnada amaahdaada (iyo dhibco kasta oo dhibco ah oo laga soo qaatay) ay leeyihiin…